GUNNO 100% DULSAARAN DHAMAAN DHIGAALKA OO DHAN
Ku soo biir FXPRIMUS waan isku beegi dooni dhigaaladaada.
ilaa $ 10000 oo lagu daray $ 4 oon dib kuugu soo celinayno marka aad lacag ganacsi dhigato (lot traded)
Ka faa’iidayso fursadan cajiibka ah!
SUUQYADA PRIMUS waxay ku faraxsan yihiin inay usoo bandhigaan macaamiishooda sharafta leh dhigaal 100% gunno oo gaadhaysa $10,000 ay la socoto $4 oo dib laguugu soo celinayo markasta oo aad ganacsi gasho!
Noqo ka lagu abaalmariyo abaalmarin oo la heli karo wakhti xaddidan oo keliya. Kaga ganacso PRIMUS suuqa sarifka lacagaha qalaad, energies, indices and lacagaha digitaalka ah (cryptocurrencies), oo ka macaash mid kamid ah kuwa ugu aaminsan uguna gunno fiican onlineka, gunnada dhigaalka (Deposit Bonus) la hubo leh 100%
Waxaan rajeyneynaa inaan kugu taageerno safarkaaga ganacsi illaa guusha! hoos u dhaadhac ilaa aad ka gaadho xaga hoose ee bogan si aad u sharciyada iyo shuruudaha abaalmarinta.
Gunnada 100% waxay u furan tahay Macaamiisha cusub iyo kuwa jira ee dhiganaya ama dib-u-dhiganaya Live Individual, Joint, ama Corporate ECN ama koontada ganacsi ee kala duwan ee leh PRIMUS MARKETS INT Limited (hadda kadib ‘PRIMUS MARKETS). Gunnada 100%, PRIMUS MARKETS waxay 100% ku dhigi doontaa koontada tareedinka/ganacsiga ee Macaamilka waxayna kugu deeqi doontaa lacag-celin tira walba oo lagu ganacsado, iyadoo la raacayo shuruudaha iyo xaaladaha hoos ku yaal.
Siintani waxay bilaabmeysaa 1-da Febraayo 2016 waxayna ansax tahay illaa 31-ka Diseembar 2021, halkaas oo dalacsiintu ku egtahay/dhaceyso.
PRIMUS MARKETS waxay dalacsiin doonta 100% Deynta iyo $ 4 (oo loogu talagalay ECN Premier Accounts) iyo $ 2 (oo loogu talagalay Variable Spread Accounts) dib u celinta lacagaha heer walba iyo tiro walba oo lagu ganacsado (oo in badan ay matalayaan tirada 100,000 oo unug) ECN iyo Variable spreads sida ay u kala horreeyaan (Siinta) Macaamiisheeda. Siinta waxay ku xiran tahay shuruudaha iyo xaaladaha ku jira dukumintiga xaadirka ah hadda waxayna ku xiran tahay dhammaan shuruudaha iyo xaaladahaPRIMUS MARKETS.
Iska diiwaangelinta, furashada live account, iyo ama aqbalida shuruudaha iyo xaaladaha kujira bogagga lasoo degida ee kugu haboon iyo/ama aaga xubinta macmiilka, ganacsaduhu wuxuu qirayaa inuu aqriyey, fahmey oo ogolaadey in lagu xidho shuruudaha iyo xaaladaha Siintani.
Siintani waxaa xaq u leh Macaamiisha jira iyo kuwa cusub ee PRIMUS MARKETS kuwaas oo dhigaya ama dib-u-dhiganaya Live Individual, Joint, ama Corporate ECN Premier ama Variable trading account, iyo kuwa ku ganacsada aalad kasta oo ay bixiso PRIMUS MARKETS marka laga reebo Suuqyada MAREYKANKA. Akoonnada Micro ah ayaa laga reebay.
Haddii koontada Macaamilka lagu maamulo gudaha Multi-Account-Manager (MAM) ama PAMM, si looga qaybqaato Siintani, macmiilku waa inuu iska diiwaangaliyo oo uu furto koonto ganacsi cusub oo iskiis u maamulayo.
Shirkadaha MAREYKANKA ganacsiga waxyabaha laguma siin doono lacag-celin wax kasta oo ganacsiga heer walba oo qeyb ka ah siintani.
Dhigaashada ugu yar ee lagu dalban karo Siinta waa 500 DOOLAR ama lacag u dhiganta. Lacag dhigashada dheeriga ah qaddar kasta waxay ku kordhin doontaa gunnada lacagta qaddarta la dhigey, Deynta ugu badan ee lagu heli karo Siinta waa 10,000.00 DOOLAR ama u dhiganta lacag. Ka dib markii koontadu ay hesho 10,000 DOOLAR oo ah lacagaha deynta gunnada, lacag dhigashada dheeraadka ah ma kordhin doono qadarta gunnada.
Saamiga (leverage) ugu badan ee lagu bixiyo Siintani waa 300:1 Haddii koontadaada hadda jirta saamiga (leverage) u ka weyn yahay saamiga ugu badan (300:1), adoo aqbalaya shuruudaha iyo xaaladaha, waxaad ku raacsan tahay in saamiga (leverage) koontadaada ay isla markiiba hoos ugu dhigi karto 300:1. PRIMUS MARKETS mas’uul kama aha wixii lumis ah iyadoo ay ugu wacan tahay dhimista saamiga (leverage).
Siintani waxay ku egtahay hal (1) koonto macmiilkiiba iyo cinwaanka IP keliya, iyadoo aan loo eegin tirada akoonada uu haysto macmiilka.
Siinta waxaa loo isticmaali karaa qaab lagu kordhiyo booska ugu sarreeya ee faa’idada ah.
Heerka kala-bixida akoonnada ku jira kor u qaadistani waa 30%. Marka heerkaaga tirada la rabay (margin) uu gaaro 30% nidaamku wuxuu bilaabi doonaa inuu si otomaatik ah isu xiro tareedyada kuu furan, booska ugu qasaaraha badan ayaa marka hore xirmi doona.
Markasta oo wax badan 1 lot lagu tareed gareeyo, lacag-celinta faaiidada ee kala duwan ($ 4 ama $ 2) ama lacag u dhiganta ayaa laga wareejin doonaa ‘Deynta’ loona wareejin doona ‘Hadhaagaaga’. Lacag-celinta ayaa la adeegsadaa marka tareedku xirmo (tareedku waa in la xidho lacag-celinta inuu kiciyo). Haddii gunnada la lumiyo oo ay furnaadaan jagooyinka tareed, macmiilku ma heli doono lacag-celin boosaskaas furan marka la xidho.
Boosaska tareedka furan wax ka yar hal daqiiqo xaq uma laha inay helaan lacag-celin; boosaska tareedka furan wax ka badan hal daqiiqo, laakiin in ka yar laba daqiiqo u qalmi doona 50% xalada lacag-celin tirda lagu sheegay.
Hadday xisaabta koontadu ay la mid tahay tirada lacag Siinta, ka dibna lacagta la Dhigay ayaa si otomaatik ah looga saari doonaa koontada Macmiilka.
Nooca Ingiriisiga ah ee dukumintigan waa lagu baddeli kara, marki wax isdhaaf ah oo ku saabsan shuruudaha Siintani dhacdo, marka loo turjumo luqaddo kale.
Gunnada 100% ee qeybta Siinta waxaa loogu talagalay ujeedooyin ganacsiga tareed oo keliya oo lalama bixi karo mana lumi karto.
Kala bixid kasta oo laga sameeyo koontada Macmiilka waxay keeni doontaa in gunnada lagu siyey in si buuxda looga saaro.
Wareejinta gudaha MT4 tu MT4 kale, ama looga soo diro koonto Siinta, lama oggola. Haddii wareejinta gudaha la codsado, Gunnada 100% ee qeybta Siinta waa laga saari doonaa.
Xaaladda lagu jiro ma noqon karto PRIMUS MARKETS inay mas’uul ka tahay cawaaqib kasta oo keeneysa burinta Siinta ama diidid, oo ay ku jiraan, laakiin aan ku xaddidnayn dalabka (s) xiritaanka ee joojinta.
Jadwalka tusaalooyinka Gunnada 100% ee qeybta Siinta:
Debaajigaaga Debaajigaaga Xisaabinta Gunnada (Amaah) Gunnadada (Amaah) Hantidaada Your Bonus (Credit) Your Equity
500 DOOLAR 100% ee 500 DOOLAR 500 DOOLAR 1000 DOOLAR
1,000 DOOLAR 100% ee 1,000 DOOLAR 1,000 DOOLAR 2,000 DOOLAR
10,000 DOOLAR 100% ee 10,000 DOOLAR 10,000 DOOLAR 20,000 DOOLAR
30,000 DOOLAR Ugu badnaan 10,000 DOOLAR 10,000 DOOLAR 40,000 DOOLAR
50,000 DOOLAR Ugu badnaan 10,000 DOOLAR 10,000 DOOLAR 60,000 DOOLAR
Siintani laguma dari karo wax kale oo ah Gunno ama lacag-celin ku saleysan heerka ganacsiga tareedka taas oo PRIMUS MARKETS ay bixin karto. Koontada ganacsi ee Macaamilku horey u lahaa Gunno jirtey, ma awoodi doonaan inay doortaan kor u qaadistani AMA iyagoo aqbalaya Shuruudaha iyo Xaaladaha, Macmiilku wuxuu kaloo aqbalayaa in Gunnadii hore laga saari doono ka hor inta aan lagu saleynin Siinta cusub
2. Haddii PRIMUS MARKETS ay ka shakiyaan ama ay leeyihiin sabab ay ku aaminaan in Macaamilku ku xadgudbey ama isku dayey inuu ku xadgudbo shuruudaha Siintani ama Bixin kasta oo ay soo bandhigtey PRIMUS MARKETS , ama uu ku dhaqaaqay caqiido xumo, PRIMUS MARKETS waxay xaq u leedahay, iyadoo ay ku xiran tahay ikhtiyaarkeeda, in la diido, laga joojiyo, laga noqdo ama laga saaro Macmiilka Siinta iyo, haddii ay daruuri tahay: (i) in laga joojiyo, laga buriyo oo laga jaro koontada (yada) Macaamilkaas, (ii) in laga saaro macmiilka helitaanka adeegyada ay bixiso PRIMUS MARKETS iyo/ama laga saaro heshiiska u dhexeeya PRIMUS MARKETS iyo Macaamiilka siinta adeegyada (iii) si loo xiro Akoonka Macaamilka (hase yeeshe, keydso meesha haddii kale looga baahan yahay maamulka ay khuseyso) iyo in loo habeeyo wareejinta wixii hadhaa ah ee aan la isticmaalin, oo ka yar lacagta Siinta iyo sidoo kale wixii faa’iido ah ee Shirkaddu u aragto iyadoo loo marayo in Macaamilka uu la kulmay Habdhaqanka Xadgudubka. Halka Habdhaqanka Xadgudubku ay ku jirto laakiin aan ku xaddidneyn:
a) Halka macmiilku kaligiis ama uu kula dhaqmayo dadka kale (oo ay ku jiraan Bare Ganacsi/gacansaar) ay aasaaseen tareedinka ama jagooyin kuwaas oo leh ujeedo ama saameyn ku yeesha soo saarista Deynta la siiyey iyo/ama faa’iidada ay soo saartay Bixiyaha, iyadoon loo bandhigin halis dhaqaale, oo ay ku jirto xadid la’aan qasaare Siinta ama hantida Macaamiilka (ama hantida dadka kale).
b) Halka macmiilku kaligiis ama uu kula dhaqmayo dadka kale (oo ay ku jiraan Bare Ganacsi/gacansaar) uu xayndaabo tareed yada, oo ay ku jiraan xad la’aan, ku haynta boos (yada) furan hal jiho, oo ay ku jiraan qaab sawir kaliya, lacago isku mid ah ama isku xiran, xilliyada lasiyey gudaha (iyadoo la adeegsanayo akoonnada kale ee ganacsi tareedinka ee laga leyahay PRIMUS MARKETS ama dibedda (iyadoo la adeegsanayo akoonnada kale ee ganacsi tareedinka ee laga leyahay dilaaliin kale).
Haddii ay dhacdo in koonto boosas tareedinka u furan yahiin oo ay ku socdaan faa’iido/qasaaro inta tirada Bixintu laga saaro sabab kasta ha noqotee, PRIMUS MARKETS mas’uul kama noqon doono waxyeellooyin kasta oo xun saameyntooda.
Haddii ay dhacdo in akoonka u qalmo in laga Joojiyo dhamaan gunnooyinka iyo amaahda dalacsiinta si otomaatik ah ayaa looga saari doonaa.
Waxaa muhiim ah in Macaamiisha Uqalma ay ka warqabaan in halistooda aysan ku ekeyn debaajiyahooda (yada) oo keliya kuwaas oo ka dhigaya mid u qalma tareedinka in ay macquul tahay in ay ku khasaaran wax ka badan debaajiyahooda. Xaaladaha qaarkood, khasaaruhu wuxuu aad uga badan karaa dhigaalka koowaad ama ka yar.
PRIMUS MARKETS waxay xaq u leeyihiin, ikhtiyaarkooda keliya, inay beddelaan, wax ka beddelaan ama joojiyaan Siinta, ama dhinac kasta oo ka mid ah, wakhti kasta iyo ogeysiis hore la’aan.
Xuquuqda-daabacaadda © 2020 PRIMUS MARKETS. Xuquuqda Daabacaadu Way-xifdisan tahay